कविता : चप्पलहरू- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कविता : चप्पलहरू
कार्तिक १६, २०७६ भूपेन्द्र खड्का
काठको साँघु तर्दै गर्दा एक दिन मेरा कलिला पैतालामा ठेड्को पस्यो,देब्रे हातको कमिजको बाहुलाले नाकको सिंगान पुछ्दै
दायाँ हातले चप्पल समाउनै लाग्दा
मेरो दायाँ चप्पल काँठेखोलामा खस्यो
र, हेर्दाहेर्दै पानीको भुमरीमा
चक्कर मार्दै बगेर गयो बर्खेभेलमा
स्कुल हिंँडेको म
देब्रे चप्पल हातमा समाएर घर फर्कें
खाली खुट्टामै सकियो मेरो
कखरा जुनी !
लामो झोलुङ्गे पुल तरेर
कलेज जान थालें,
मक्किएको काठको फलेकको प्वालबाट
फेरि मेरो यौवनको चप्पल
र, बगायो खोलाले उसै गरी
मेरो किशोर जुनी !
एक साँझ सहर पस्दै गर्दा
उसैगरी खस्यो मेरो दाहिने चप्पल
र, बगायो यसपालि काली खोलाले !
दर्जनौं वर्षहरू बिते,
बाल्यकालको मेरो चप्पलमा
कीराहरूले कति प्वाल पारे होलान्
किशोरवयको मेरो चप्पलमा बसेर
खोले गाड्यौलाहरूले कति यात्रा
तय गरे होलान् !
यौवनको मेरो चप्पल त
शालिग्राम पो बनिसक्यो कि !
आज जीवनको पुछारमा
समुद्रको किनारमा उभिएको छु !
मेरो बाल्यकाल, किशोरवय र यौवनका
चप्पलहरू मेरो सामुन्नेमा
बग्दैबग्दै आएका छन् !
पार गरेका मेरा चप्पलहरू
मजस्तै छिद्रैछिद्रा परेका
दुब्ला र पातला छन्
मेरी आमाले धरो च्यातेर बाँधेका डोरा
आमाको उस्तै गन्धमा आज पनि
यी चप्पलहरूमा मोतीजस्तै टल्किरहेछन् !
भोलि तेस्रोलिङ्गीहरूको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन थाइल्यान्ड जानुअघि विख्यात तेस्रोलिङ्गी उभयदासको हालै प्रकाशित चर्चित डायरी पढ्दै थिएँ । समयाभावले पूरै पढ्न पाएको छैन । सबै पढेपछि डायरीमाथि आफ्ना अनुभवसहितको विचार व्यक्त गरूँला ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ १०:२४